आज एकै दिन ५९ जनामा को'रोना पुष्टि, सं'क्रमितको संख्या ५१६ पुग्यो ! -
आज एकै दिन ५९ जनामा को’रोना पुष्टि, सं’क्रमितको संख्या ५१६ पुग्यो !
काठमाडौँ। को’रोना भा’इरस कोभिड-१९ बाट थप ९ जनामा सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेलुका ८:१५ बजे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै थप ९ जनामा को’रोना सं’क्रमण भएको पुष्टि गरेको हो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, काठमाडौँमा गरिएको परिक्षणमा को’रोना पुष्टि भएका भक्तपुरकि ४२ वर्षीय महिला र मकवानपुर् हेताउदा ३ का ५४ वर्षीय पुरुष रहेका छन ।
त्यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा गरिएको परिक्षणमा सप्तरी बलान बिहुल गाउपालिकाका ३५ वर्षीय पुरुष रहेका छन । कि’टजन्य रो’ग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हेटौडामा गरिएको परिक्षणमा बारा सिमरनगड नगरपालिकाका २२,२७,३०,३४,३८,४५ वर्षीय पुरुषहरु रहेका छन ।
यो संगै आज एकै दिन को’रोना भा’इरसबाट सं’क्रमितको संख्या ५९ जना पुगेको छ । नेपालमा जम्मा को’रोना भा’इरस सं’क्रमितको संख्या ५१६ जना पुगेको छ । जस मध्ये ७० जना निको भएर घर फर्किएका छन् । भने अहिले सम्म ३ जनाले ज्या’न गु’माएका छन ।